3 maalmood Chiang Mai Way of Life -
Maalinta 1aad | Chiang Mai [Casho]
Ka dib markii aan ka degno garoonka diyaaradaha Chiang Mai, waxaan u wareejin doonnaa hudheelkaaga si loo hubiyo. Riwaayadda galabnimadu waxay ka bilaabataa safar doon daqiiqado ah oo 45 daqiiqo ah oo ku teedsan wabiga Ping, iyadoo nolosha lagu qaadanayo hareeraha webiga. Ka dib waxaan qaadaneynaa sam lor (tricycle) si aan u booqano Suuqa caanka ah ee Warorot, oo ay ka buuxaan cooshado lagu iibiyo wax kasta oo ka mid ah cuntada iyo cabitaanka, qalabka iyo agabka guryaha. Ka dib waxaan u tallaabsaneynaa dariska xiga magaalada ubaxa ugu weyn iyo suuqa miraha ka hor inta aanan dib ugu laaban hoteelka. Waxaan ku raaxeysaneynaa casho maqaayada 'The Gallery Restaurant' Chiang Mai, oo la dhisay 1892 waxayna ku taal bannaanka wabiga Ping. Dhismaha hore waxaa ku yaal madxaf farshaxan ah halka alwaaxda dambe ee teak alwaax ka kooban yahay maqaaxi dhinaceeda ah. Casho ka dib, waxaan garaacnay bacadlaha habeenka midabada leh si aan u soo qabsanno waxyaabaha xusuusta leh ka hor intaanan ku laaban hudheelka.
Habeenimo Rim Resort.
Maalinta 2aad | Chiang Mai [Quraac, Qado, Casho]
Waxaan ku bilaabaneynaa maalin anagoo u kaxeynay dhanka koonfureed ee magaalada si aan u booqano Wat Ton Kwen, oo sidoo kale loo yaqaan Wat
Inthrawat. Macbudku wuxuu u taagan yahay mid ka mid ah tusaalooyinka ugufiican qaab dhismeedka Lanna ee woqooyiga Thailand. Waxaan markaa u jiheysaneynaa Hang Dong si aan ugu raaxeysano waayo-aragnimo la yaab leh oo gastronomic ah oo lala yeesho qoyska deegaanka ee Ruankaew-Yanon. Waxaa lagugu soo dhaweyn doonaa gurigooda si aad ula kulanto maalin caadi ah nolosha qof Thai ah, oo ku nool xaafad Thai ah oo dhab ah. Halkan, waxaad ku baran doontaa sida loo kariyo cuntada caadiga ah adoo adeegsanaya dhadhanka Waqooyiga Thai oo dhab ah waxaadna u adeegi doontaa khibrad cunto karis oo u gaar ah oo ka duwan fasallada karinta caadiga ah ee hudheelada. Fiidnimadii, waxaan ku raaxeysaneynaa cunnooyin casri ah oo casri ah Waqooyiga Thai oo ay weheliso qoob-ka-ciyaarka caamka ah iyo wadahadallo ka socda qabaa'illada buuraha ee Xarunta Dhaqanka ee Old Chiang Mai ka hor intaanan ku laaban hudheelkaaga.
Maalinta 3aad | Chiang Mai [Quraac]
Subaxdaada ugu dambeysa Chiang Mai waxaa lagu qaatay waqtigaaga firaaqada. Waxaad dooran kartaa inaad si fudud ugu nasato hudheelkaaga, ama aad garaacdo waddooyinka si aad u sahamiso wax badan oo ka mid ah magaaladan firfircoon ee ay bixiso. Haddii aad u baahato inaad xoogaa alaab xusuus ah daqiiqadda ugu dambeysa soo qaadatid, ka dib xiro koofiyadahaaga bilicsan iyo safar kale oo aad ugu aaddo Suuqa Warorot si aad ugu baarto meheraddeeda badan ee mashquulka badan. Bedel ahaan, ku soco socod webiga Ping, dib ugu laabo dukaanka kafeega ka dibna u sii gudub Wadada San Kamphaeng. Dubbed Handicraft Highway, waxay kuxirantahay dukaamo lagu iibiyo alaabada qalinka, dhoobada, farshaxanada, xardho alwaax, alaab xariir ah iyo lacquerware. Kadib aroortii ku soo wareeji adoo nasasho ku nasanaya mid ka mid ah meelaha badan ee ku yaal Chiang Mai. Kadib waxaan u sagootinaynaa magaalada oo waxaan u wareejineynaa garoonka diyaaradaha Chiang Mai duulimaadkaaga safarka.
Booqashooyinka iyo wareejinta leh liisan shati leh adeegyo hagitaan ah oo Ingiriis / Jarmal ku hadlaya ah. Luqadaha kale waa la codsaday waana la heli karaa;
 Hoyga wadaagista mataanaha / labbada, Qol sare oo leh hawo-qaboojiye;
Tilmaamaha Safarka Doi Tung Xalaal
Hagaha Socdaalka ee Phayao Halal
2-5 Maalmo Xalaal Booqasho